Hordhaca khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Naqshadeynta geedi socodka iyo soo saarista dhamaanteena khadka soo saarista bacriminta. Qalabka xariiqda wax soo saarka badanaa waxaa ka mid ah mashiinka laba-dhidibka ah, granulator cusub oo bacrimiya, qalajiyaha rullaluistemadka, qaboojiyaha wax qaboojiyaha, mashiinka shaandhada wax lagu duubo, qalabka wax lagu jajabiyo ee silsiladda ah, qalabka wax lagu raro ee suunka, mashiinka wax lagu rito ee qalabka wax lagu karsado iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah.
Khadadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah waxay ku habboon tahay:
Soo saaridda digada lo'da Bacriminta dabiiciga ah
Soo saarida lo'da digada bacriminta dabiiciga ah
- Soosaarida bacriminta dabiiciga ee digada doofaarka
- Soo saarista bacriminta dabiiciga ee digaagga iyo digada
- Soosaarka idaha ee soosaarida bacriminta dabiiciga ah
- Soosaarida bacriminta dabiiciga ah kadib daaweynta qashinka bullaacadaha ee degmada.
1, Digada xoolaha: digada digaaga, digada doofaarka, digada adhiga, digada lo'da, digada faraska, digada bakaylaha, iwm.
Nidaamka wax soosaarka aasaasiga ah ee bacriminta dabiiciga ah waxaa ka mid ah: shiidida alaabta ceeriin ah → halsano → isku darka maaddooyinka (isku qasida walxo kale oo dabiici ah, NPK≥4%, maadada ≥30%) ulation granulation → baako. Xusuusin: Khadkan wax soo saar waxaa loogu talagay oo kaliya.
Qalabka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah waxaa ka mid ah qalabka halsano, fiicni laba-dhudhun, mashiinka granulation-ka cusub ee bacriminta, qalajiyaha qalajiyaha, qaboojiyaha durbaanka, mashiinka baaritaanka durbaanka, silo, mashiinka baakadka oo otomaatiga ah, jajabiyaha silsiladda toosan, gawaarida xambaarsan suunka, iwm.
Habka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah:
1) habka halsano
Qashinka nooc-biyoodka ah ayaa ah qalabka halsano ee loogu isticmaalka badan yahay. Iskuduwaha jeexjeexan wuxuu ka kooban yahay haanta halsano, socodka socodka, nidaamka awooda, qalabka barokaca iyo nidaam fara badan. Qaybta rogmaysa waxaa wata rolleyaal horumarsan. Flipper-ka Hydraulic-ka ayaa si xor ah u kici kara una dhici kara.
2) geedi socodka granulation
Nooc cusub oo ah granulator bacriminta dabiiciyanka ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa qashinka bacriminta dabiiciga ah. Waa granulator gaar ah oo loogu talagalay alaabta ceyriinka ah sida xaarka xoolaha, miraha qudhunka, diirka, khudradda ceyriinka ah, bacriminta cagaaran, bacriminta badda, bacriminta beeraha, seddex qashin, shey-baareyaal iyo waxyaabo kale oo haraaga dabiiciga ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka heerka granulation-ka sareeya, hawlgalka xasilloon, qalabka waara iyo nolosha adeegga muddada dheer, waana xulasho ku habboon soo saarista bacriminta dabiiciga ah. Hoyga mashiinkani wuxuu qaataa tuubbo aan xadi lahayn, oo ah mid sii waara oo aan isbeddelin. Ku lifaaqan naqshada dekedda badbaadada, howlgalka mashiinka ayaa ka xasilloon. Awoodda isdabamarinta ee granizer bacriminta cusub ee dabiiciga ah ayaa ka sarreeya kan granulator diskka iyo durbaanka granulator. Cabbirka walxaha waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Qalabka wax lagu dhejiyo ayaa ugu habboon qashin-qubka tooska ah ee qashinka dabiiciga ah ka dib markii la khamiirinayo, iyadoo la badbaadinayo habka qallajinta isla markaana si weyn loo yareeyo kharashka wax soo saarka.
3) habka qalajinta iyo qaboojinta
Waxyaabaha qoyaanka walxaha ka dib marka granulation-ka ay soo saaraan granulator ayaa sarreeya, sidaa darteed waxay u baahan tahay in la qalajiyo si loo daboolo heerka biyaha. Qalajiyaha waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu qalajiyo qoyaanka qoyaan gaar ah iyo cabbirka walxaha ee soo saarista bacriminta isku dhafan ee bacriminta dabiiciga ah. Heerkulka walxaha ka dib marka la qallajiyo waa mid aad u sarreeya, waana in la qaboojiyaa si looga hortago in bacriminta ay ka soo xoqdo. Qaboojiyaha waxaa loo isticmaalaa qaboojinta walxaha ka dib marka la qalajiyo waxaana loo isticmaalaa iyada oo lagu daro qalajiyaha Rotary, kaas oo si weyn u wanaajin kara waxtarka qaboojinta, yareynta xoogga shaqada, kordhinta dhalidda, sii saarista qoyaanka qaybaha iyo yareynta heerkulka bacriminta.
4) habka baaritaanka
Soo saarida, si loo hubiyo isku mid ahaanta sheyga la dhammeeyay, qaybaha waa in la baaraa ka hor inta aan la xirxirin. Mashiinka shaandhaynta shaandhaynta waa aaladaha shaandhaynta guud ee habka wax soo saarka ee bacriminta isku dhafan iyo bacriminta dabiiciga ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro alaabada la dhammeeyay iyo isku-darka isku-dheellitir la'aanta iyo in lagu sii guuleysto kala soocidda alaabooyinka dhammaaday.
5) habka baakadaha
Ka dib marka la hawlgeliyo mashiinka wax lagu rakibo, culeyska culeyska culeysku wuxuu bilaabaa inuu shaqeeyo, wuxuuna ku shubaa maaddada miisaanka miisaanka ku jira, wuxuuna ku ridayaa boorso isagoo dhex maraya miisaanka miisaanka. Marka miisaanka uu gaaro qiimaha asalka ah, kan wax soo jiidaya culeyska ayaa joojinaya inuu ordo. Hawlwadeenku wuxuu kaxeystaa alaabada la baakadeeyay ama wuxuu ku ridayaa boorsada baakadaha qaadaysa mashiinka wax lagu tolo.